गरिमा विकास बैंकको हकप्रदमा मूल्य समायोजन ?
ARCHIVE, CORPORATE » गरिमा विकास बैंकको हकप्रदमा मूल्य समायोजन ?
काठमाडौं - नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले गरिमा विकास बैंकको ७०% हकप्रदमा मूल्य समायोजन गरेर ३३५ रुपैयाँ भाउ तोकेको छ । यस आधारमा हकप्रद समायोजनपछि बुधबार गरिमाको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँमा खुलेको हो । गरिमाको औसत आधार मूल्य भने ३१८ रुपैयाँ छ । गरिमाले बैशाख १४ देखि जेठ १७ गतेसम्म ९० लाख ७६ हजार २९६.६६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्दैछ ।